१५७२.५६ विन्दुमा नेप्से, कारोबार रकम २ करोडभन्दा बढी (२ बजेको अपडेट)
असोज १, काठमाडौं । बिहीवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ३१ दशमलव १७ अंकले बढेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै उकालो लागेको बजार कारोबारको यस अवधिमा २ दशमलव शून्य २ प्रतिशत बढेर १ हजार ५७२ दशमलव ५६ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस अवधिसम्म कारोबारमा आएका १२ समूहको परिसूचकमध्ये म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकी बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, होटल्स, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र लघुवित्त समूहको परिसूचक बढेको छ ।
तेस्रो घण्टाको अवधिमा १८८ ओटा कम्पनीको रू. २ अर्ब ८ करोड ९१ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यस अवधिसम्म चिलिमे हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ८ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ५२९ मा कारोबार भइरहेको छ ।
कारोबारको तेस्रो घण्टामा सोल्टी होटल्स, तारागाउँ रिजेन्सी र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा सोल्टी होटल्सको शेयरमूल्य रू. १९८, तारागाउँ रिजेन्सीको रू. २६४ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य रू. ६६० कायम भएको छ ।
मेगा बैंक नेपालले नबिकेको हकप्रद शेयर असोज ११ गतेदेखि लिलामीमा विक्री गर्दै[२०७७ असोज, ४]
सनराइज फर्स्ट म्यचुअल फण्डले प्रतिफल वितरण गर्न बुक क्लोज गर्दै[२०७७ असोज, ४]
सातामा नेप्से परिसूचक ५१.४९ अंक बढ्यो, लगानीकर्ताको सम्पत्ति ६८ अर्बभन्दा बढीले वृद्धि[२०७७ असोज, ३]
साताको अन्तिम दिन २ % बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम ३ अर्बभन्दा बढी [२०७७ असोज, १]
१५७२.५६ विन्दुमा नेप्से, कारोबार रकम २ करोडभन्दा बढी (२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १]
दोस्रो घण्टामा १५.४८ अंकले बढ्यो नेप्से, ३ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य १०%ले वृद्धि (१ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १]
१० ओटा समूहको परिसूचक सकारात्मक हुँदा १२.६१ अंकले उकालो लाग्यो बजार (१२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १]